" အမျိူးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို (အောင်ဆန်း)လို.ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကြပြီ"
နာမည်ယူထားတာက ဧရာဝတီ လုပ်ပုံက မိုက်ရိုင်းလွန်းသည်၊ အောက်ပါသတင်းတင်ပြချက်ခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ပါ အလွန်ကိုဆိုးဝါးလွန်းသည့်အပြင် ပြောရန်ဝေါဟာရပင်မရှိတော့ပါ။ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေဟာ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဒီမိုကရေစီရရှိရေး နှင့် လူ.အခွင့်အရေးများအတွက် မည်ဆို.မည်ပုံလုပ်ဆောင်ပါမည်ဟု အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံစည်းရုံးလျက် နည်းပညာ၊စက်ကရိယာများနှင့် ငွေကြေးအထောက်အပံတွေရယူထားပြီး လုပ်ကိုင်နေကြသူတွေပါ။ ပြည်တွင်းမှာ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေကျခံနေသူတွေသာ ကျခံနေကြရ၊ ဘ၀တွေ မိသားစုတွေ ဒုက္ခဖြစ်နေလည်း၊ သူတို.တွေဟာ ပြည်ပမှာ ဟိုနိုင်ငံသွားလိုက် ဒီအစည်းအဝေးတက်လိုက်နဲ့ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးတို.၊ ဒီမိုကရေစီရေးတို. အသံကောင်းဟစ်နေကြတာပါ၊ အဲဒီအချိန်မှာ
ပြည်ပမီဒီယာသမားတွေ စားသောက်နေထိုင်နိုင်မှုဟာ ပြည်တွင်းက ယုံကြည်ချက်ကြောင့်နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူတွေရဲ. ကျေးဇူးတွေပါ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ထမင်းရှင်တွေပါ။
အခုတော့ အမျိူးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ( အောင်ဆန်း ) လို.တောင် မိုက်ရိုင်းစွာရေးသားလာကြပါပြီ၊ ကြည့်လေ ဒေါသထွက်လေ ခံစားရလေပါ၊ သူတို.ပြောနေ အော်နေတဲ့ ဆန်.ကျင်ဘက်ဆိုတဲ့ အဖွဲ.အစည်းကတောင် အောင်ဆန်းလို.မခေါ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။
ကဲ....... နိုင်ငံကိုချစ်ကြသော အမျိုးဂုဏ်ကိုလေးစားကြသော ကျွန်တောတို.ညီအကိုမောင်နှမများခင်ဗျား- ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အောင်ဆန်းလို.သတင်းဖော်ပြချက်တပ်ထားသော ဧရာဝတီသတင်းဌာနကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းခိုင်းကြမှာလဲ ..................................
By: Kyaw Swar Myint
aye November 12, 2011 at 8:12 AM
ဧရာဝတီသတင်းဌာနက ကောင်တွေ လုပ်စားတာတွေ မိုက်ရိုင်းတာ တွေကတော့ အများကြီးပဲ
မကြာခင် အမှိုက်ဖြစ်တော့မဲ့ အကောင်တွေပါ
ကျော် November 12, 2011 at 8:30 PM
ဟုတ်တယ်။မှန်ပါတယ်။နာမည်တပ်တာမှားတာလား ။တမင်းနာမည်ကိုရေးတာလား။ နိုင်ငံအကျိူးကို လုပ်ပြီးဒါလေးတောင်ပေါ့ဆရလား။